बालुवाटारस्थित ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा: ‘हाई प्रोफाइल’को बिगो कति ? | नेपाली जनता :: Nepali Janta:
बालुवाटारस्थित ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा: ‘हाई प्रोफाइल’को बिगो कति ?
प्रकाशित मिति २२ माघ २०७६, बुधबार २०:४३ लेखक नेपाली जनता
काठमाडौं । बालुवाटारस्थित ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १७५ विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । बुधबार अख्तियारले बिचौलीयादेखि पूर्वमन्त्रीसहित १७५ विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको हो । अख्तियारले पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारविरुद्ध ९ करोड ६५ लाख ७६ हजार बिगो दाबी गरेको छ । उनीमाथि भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ बमोजिम सजाय हुनेछ ।
त्यसैगरी पूर्वमन्त्री चन्द्रदेव जोशीविरुद्ध ७ करोड, ८ लाख ४८ हजार, डम्बर श्रेष्ठमाथि ९ करोड, ६५ लाख ७६ हजार रुपैयाँ बिगो दाबी अख्तियारले गरेको छ । पूर्वसचिव छविराज पन्तविरुद्ध ९ करोड, ६५ लाख, ७६ हजार बिगो दाबी गरेको छ भने अख्तियारकै पूर्वआयुक्त दीप बस्न्यातविरुद्ध ९ करोड ६५ लाख ७६ हजार बिगो दाबी गरिएको छ ।
लेखक तथा पूर्वसचिव दिनेश अधिकारीमाथि ७ करोड, आठ लाख ४८ हजार बिगो दाबी गरिएको छ । बिचौलिया शोभाकान्त ढकालविरुद्ध ३९ करोड, २७ लाख ६८ हजार र अर्का बिचौलिया रामकुमार सुवेदी ५२ करोड, ५१ लाख ४० हजार बिगो दाबी अख्तियारले गरेको छ ।
‘हाई प्रोफाइल’को बिगो कति ?
काठमाडौं । टर्कीमा शक्तिशाली भूकम्प गएको छ । भूकम्पमा कम्तीमा १८ जनाको मृत्यु भएको छ भने सयौं घाइते…
प्रताप स्मृति पत्रकारिता पुरस्कारद्धारा नेपाली जनताका सम्पादक ढकाल पुरस्कृत
काठमाडौँ । नेपाल पत्रकार मञ्चले यस वर्षको प्रताप स्मृति पत्रकारिता पुरस्कारले नेपाली जनता अनलाईनका सम्पादक यज्ञ ढकाललाई…
पहिरोको जोखिममा बडालगाउँका नौ घर
दार्चुला । महाकाली नगरपालिका–१ बडालगाउँका नौ घरपरिवार पहिरोको जोखिममा परेका छन्। वस्तीमुनि पहिरो गएको र माथिबाट समेत पहिरो खस्न…
हेटौंडा । ३ नम्बर प्रदेश सरकारले माघ १६ गते शहिद दिवसका दिन सार्बजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ ।